दैनिक दिसा लाग्दैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Khabaarpati
दैनिक दिसा लाग्दैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
November 12, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on दैनिक दिसा लाग्दैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । हाम्रो स्वस्थ्य हाम्रै हातमा रहेको छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा देखिने समस्यालाई समयमनै पहिचान गरी सहि उपाय अपनाउन सकेका हामी निरोगी भई लामो समयसम्म जीवन बिताउन सक्छौं।
पछिल्लो समयमा शरीरमा देखापर्ने समस्या मध्ये सबैभन्दा शरीरलाई देखापर्ने समस्या पेटसगँ सम्बन्धी समस्या हो।
भनिन्छ, पेट सफा छ वा शरीरमा कुनै पनि किसिमको खराबीपना हुदैन् र अन्य रोगले हामीले सताउँदैन्। पेटमा खराबीपना देखापरेमा सुरुको अवस्थामा नियमित रुपमा दिसा नलाग्ने, एकदमै कम दिसा पटकपटक लागिरहने, पेट फुलेको वा डम्म भएको फिल हुने, खाना खाँदा पनि नखाँदा पनि पेटभारी हुने, काम प्रति जोश जागर नआउने, थकाई लाग्ने जस्ता समस्या देखापर्दछ।
यस्ता समस्यालाई आमले सामान्य समस्या भनेर वास्ता गदैनन्, यसरी वास्था नगर्नु भनेको रोगलाई निम्तो दिनु भएकाले समस्याको समधान तर्फ अघि बढ्नुपर्दछ। पेटमा देखापर्ने सम’स्यालाई वास्था नगर्दा बिरामी बेडमै थलापला पर्दछन्।
पेटमा खराबीपना भएमा ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सर लगायतका अन्य रोगले समाउँछ ।सबैको चाहना सुन्दर बनौं भन्ने हुन्छ। सुन्दर रहनको लागी पनि पेटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।पेटमा फोहोर वा खराबीपना छ भने त्वचामा पनि र कपालमा समस्या सिर्जना जस्तै त्वचामा कालो दाग धब्बा, कपाल झरेर पातलो हुने, कपाल वा अनुहार रुखो देखिने आदि। पेटलाई सदैव सफा राख्नको लागी जस्तो सुकै दिसालाई निकाल्न जरुरी छ।
हामीेले उपचार विधि अपनाउदाँ सय प्रतिशत प्राकृतिक, लाभदायी विधि अपनाउनुपर्दछ। जसको कारणले गर्दा पुरै पेटलाई सफा बनाउन सकिनेछ। यस्ता छन्, पेट सफा गरी स्वस्थ रहने उपाय।
बेलुका अपनाउने उपाय
दुई–दुर्ई चम्चा ज्वानो र जीरालाई एक दुई मिनेट भुटेपछि धनिया लाई २ मिनेट भुटेर पिसेर पाउडर बनाई त्यसमा आधा चम्चा जति कालो नुन, बेसार, सुकेको पुदिनालाई हालेर मिक्स गरेपछि औषधी तयार हुन्छ।
यसरी तयार पारेको औषधी रातीको खानापछि मनतातो पानीमा एक चम्चा हालेर सेलाएपछि सेवन गर्ने यसरी सेवन गर्नाले पेट पूर्ण रुपमा बिहान उठ्दा सफा हुन्छ।
नायक धिरेन शाक्यको छोरी पनि फिल्ममा आउँदै, पहिलो पटक मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
यस्ता छन् फालिने चौलानी पानीका अनगिन्ती फाइदा, तपाईले नि फाल्नुहुन्छ ?
दिनको २ ३ पटक चिनी हालेको चिया पिउने गर्नु भएको छ भने केही बर्षमा यस्ता रोगको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ।कसरी गर्ने यसको समाधान?नछुटाई पढ्नुहोस
November 6, 2020 Khabar Pati
July 5, 2021 goodmam
खाना खाने बेलामा कहिल्यै नगर्नुहोस यस्ता गल्ति।अन्नले सरापेर हुनेछ विनाश।धेरैले बेवास्ता गर्छन यस्ता कुरा र अन्त्यमा पछुताउनु बाहेक अरु विकल्प रहन्न।